Akhriso:-Labo qodob oo al shabaab ugu suura gashay in ay helaan tuutihii Ciidanka 14ka Oktoobar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhriso:-Labo qodob oo al shabaab ugu suura gashay in ay helaan tuutihii Ciidanka 14ka Oktoobar
Isagoo arrintaas sii adkaynaya ayuu yiri “ka furashadu laba iyo seddex kaliya ma ah ee guutooyin dhan ayey wax ka qaadanayaan. Marka la tababarayo waxaa la yiraahdaa ‘ dharkiinii iyo kabihiinii iyo qalabkiinii cadawga ayaa haysta ee ka doonta’ waana ka doonteen, waana helaan oo waa kuwaas aad sheegayso”.
Isagoo ka hadlayey waajibka ka saaran dawladda ilaalinta qalabka ciidanka ayuu Jeneraal Galaal sheegay in dawladdu “aysan hagar ku jirin”, hase yeeshee wuxuu qabaa in “madaxda rayidka ah aysan lahayn aragti milateri, dadka ay u yeertaanna wax dhaaxaa ma dhaamaan, ceeb ayeyna u arkaan in wixii aysan aqoon ay dadka weydiiyaan” ayuu yiri Jeneraal Galaal.
Arrintan ayaa timid ayadoo madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo la ciidayey ciidanka milateriga uu ka codsaday in aysan “dareeskooda suuqa ku iibin”.
Madaxweyne cusub oo loo doortay DDSI